Somaliland oo markale weerartay deegaan ay joogeen madaxda Khaatumo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somaliland oo markale weerartay deegaan ay joogeen madaxda Khaatumo
1st September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Ciidanka maamulka Somaliland, ayaa la sheegay iney weerar ku qaadeen tuuladii lagu caleemo saaray madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galayr oo ku taalla xadak Itoobiya iyo Soomaaliya.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, ayaa Wargeyska Jamhuuriya ee Hargeysa ka soo baxa u xaqiijiyey in ciidanka Somaliland hawlgal ka fuliyeen degaan gudaha Itoobiya ah, loona yaqaan Dooxada Eerigo oo ah halkii lagu caleemo saaray Cali Khaliif Galayr, kadib markii ciidanka Somaliland fashiliyeen xaflad lagu qaban rabay tuulada Saax-dheer, Khamiistii lasoo dhaafay.
Wargeyska Jamhuuriya ayaa sidoo kale sheegay in hawlgalka ay ciidanku ka fuliyeen deegaanka Eerigo ku qabteen maxaabiis uu ku jiro maayirkii hore ee magaalada Laascaanood Kayse Maxamuud Xaaji Xuseen (Tungub) oo hore u sheegay inuu ka goostay Somaliland, kuna biiray maamulka Khaatumo.
Dhanka kale, Maamulka Somaliland ayaa sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay dhaawacday heshiiska wadahadalka udhaxeeyay Dowladda iyo maamulkaasi.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Soomaaliland C/laahi Maxamed Cukuse oo la hadlay Warbaahinta, ayaa wuxuu sheegay in Dowladda Soomaaliya aysan awood u laheyn ka hadalka amuuraha ka taagan Soomaaliland.
Wuxuu sheegay in amuuraha ka taagan Somaliland ay gaar u tahay maamulkaasi oo dowladda Soomaaliya ay joojiso faragelinta ay wado.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Somaliland C/laahi Maxamed Cukuse, ayaa sidoo kale sheegay in hada dhaawac uu yahay wadahadalkii udhaxeeyaya dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkii tagay, waxa ay ka hadashay dagaalkii ka dhacay deegaanka Saaxdheer oo ka tirsan Gobalka Sool, halkaasi oo ay ku dagaalameen maamulada Soomaaliland iyo Khaatuma.
Daawo sida Nabad Sugidda Soomaaliya ula dagaalantay ragii weeraray Godka Jilacow
Dhagesyo Siidii: Shabaab Isgoobe ayaa lagu xaaqayaa